Mametraha andrasana amin'ny fifanarahana fanekena | Martech Zone
Mametraha andrasana amin'ny fifanarahana fanekena
Alahady, Martsa 22, 2009 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Amin'ny maha mpivarotra anao dia mety miankina amin'ny fampiharana sy loharanon-karena avy amin'ny antoko fahatelo ianao hanatanterahana ny fampielezan-kevitrao.
Nanoratra teo aloha momba ny fomba ny fametrahana ny zavatra andrasana amin'ny mpanjifanao dia mitarika ny fahafaham-pon'ny mpanjifa… Misy ihany koa fomba iray ahafahanao manampy amin'ny fampandehanana ny fahafaham-ponao manokana - manangana fifanarahana fanekena handaminana ny fifandraisan'ny antoko fahatelo.
Ny fifanekena amin'ny fanekena dia mametraka fitsipika lalao ho an'ireo mpivarotra izay miara-miasa aminao alohan'ny hanombohany akory aza. Ny fifanarahana fanekena dia misy zavatra toy ny:
Iza no tompon'ny fananana ara-tsaina amin'ny tetikasa iray.
Iza no tompon'ny loharanon-karena (sary, kaody, sns.)
Na hapetraka na tsia ny fanemorana ny fandoavam-bola raha tsy vita ny asa ao anatin'ny fe-potoana nampanantenaina.
Rahoviana ary amin'ny fomba ahoana no hafindra loharano raha toa ka mianatsimo ny fifandraisana.
Na afaka mamindra ilay tetikasa ny antoko fahatelo na miasa amin'ny orinasa hafa na loharano.
Na afaka mampiroborobo ny asa ataony ny ankolafy fahatelo na tsia.
Angamba ianao aza manana zavatra tianao sy tsy tianao manokana rehefa miara-miasa amin'ny mpivarotra ianao, mifanatrika amin'ny fotoana voafetra, fehezan-damba, antontan-taratasy, endrika sns.) Ny fananana fifanarahana ekena mahazatra hanombohana fifandraisana amin'ireo mpivarotra anao dia hiaro anao amin'ny aretin'andoha ary hialana amin'ny olana ara-dalàna aza. ny lalana. Hanoro hevitra azy ireo aho!
Tahaka ny fifanarahana asa miaraka amin'ireo mpiasanao dia hisorohana ny fifanolanana amin'ny mpiasa, ny fifanekena amin'ny fanekena dia afaka misoroka olana amin'ny mpivarotra sy ny loharanon'ny antoko fahatelo.
Tags: fizarana gazetySearch Marketing
Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia tsy tia fanovana
Rafitra fiantsoana hybrid fifandraisana = Mahagaga
Mar 22, 2009 ao amin'ny 11: PM PM
Doug, mamaky boky momba ny fitantanana tetikasa ve ianao? Ankehitriny, aza mibilaogy rahampitso momba ny tetikasa scope creep sao ho fantatro fa ianao. Tena marina ny zavatra lazainao ary izay manana fahaiza-manao tsara amin'ny fitantanana tetikasa dia hahafantatra izany.
Toa mora ny manao izany, saingy tsy izany. Indrindra rehefa tsy voafaritra tsara ny tetikasa miaraka amin'ny vokatra tadiavina.
Nahita olana goavana tahaka ny resahinao eto amin'ny sary manokana aho. Rehefa avy novolavolaina sy natao ny fanovana, iza no tompony? Toa asa mandreraka ny manapa-kevitra an'io mialoha io fa tena afaka mamaha ny krizy any aoriana.
Lahatsoratra tsara, fa esory ny boky PM! :)
Tsia, tsy izany aho – fa nieritreritra be momba ny zavatra novakiako bilaogy aho tato anatin'ny taona vitsivitsy ary tsy mieritreritra aho fa nandany fotoana betsaka tamin'ny tetika sy ny fitarihana toy ny tamin'ny antsipiriany voafetra.
Ary koa, miaraka amin'ny fandefasana fanombohana hafa niara-niasa tamiko (Koi Systems), tianay ny hahazoana antoka fa ny dolara rehetra lanina dia manana fiverenana lehibe amin'izany. Rehefa manohy miasa amin'io tetikasa io aho dia hanohy hizara ity karazana torohevitra ity.
Hiezaka aho ny hampifangaro azy eo anelanelan'ny macro sy micro, tho!
Misaotra betsaka amin'ny fanehoan-kevitra!